China Portable X-ray Scanner System HWXRY-03 fanamboarana sy orinasa | Heweiyongtai
Ity fitaovana ity dia rafitra scanning x-ray mavesatra mavesatra, azo entina bateria, natao hiara-miasa amin'ny ekipa mpamaly voalohany sy ny ekipa EOD hanomezana fahafaham-po ny filan'ny saha. Ny lanjany maivana ary miaraka amin'ny rindrambaiko malala-tanana amin'ny mpampiasa izay manampy ny mpandraharaha hahatakatra ny fiasa sy ny fiasa ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny fampielezana baomba mipoaka be dia be dia be dia be ny fanamby sy fandrahonana ho an'ny sivily, ny mpitandro ny filaminana, ny ekipan'ny baomba miaramila sy ny polisy ary ny ekipan'ny EOD manerantany. Ny tanjon'ny Boper Disposal Operators dia ny fanatanterahana ny asany araka izay azo atao. Noho izany antony izany, ny fitaovan'ny EOD, ary ny rafitra scanner x-ray azo entina manokana, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana an'io tanjona io - manome fotoana tena izy, sary avo lenta amin'ny zavatra ahiahiana, sady miantoka ny filaminan'ny antoko rehetra voarohirohy.
Ny rafi-scanner X-ray azo entina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizahana ny zavatra rehetra - toy ny fitaovana elektronika, fanaka, rindrina (beton, rindrina) ary koa ny fizahana ny efitrano fandraisam-bahiny iray manontolo. Rehefa miambina tarehimarika iray, na ambasady iray, ireo entana ireo ary koa ny fanomezana tsy dia manan-tsiny na finday dia tsy maintsy jerena raha misy fanovana kely na kely aza amin'ireo fitaovana elektronika mety hidika hoe fitaovana enti-mihaino.
Ny rafi-scanner X-ray azo entina dia mifanentana amin'ny kontrabta - zava-mahadomelina na fitaovam-piadiana, ary ny fahitana ny IED amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo zavatra ahiahiana manerana ny sisin-tany sy ny perimeter. Mamela ny mpandraharaha hitondra ny rafitra feno ao anaty fiarany na anaty kitapo rehefa ilaina izany. Ny fanaraha-maso ireo zavatra ahiahiana dia haingana sy tsotra ary manome ny kalitaon'ny sary avo indrindra ho an'ny fanapahan-kevitra eo noho eo.
Amin'ny fadin-tseranana dia tsy maintsy manao fanaraha-maso haingana sy tsy manelingelina ary tsy manimba ireo fiara ahiahiana ho hitan'izy ireo isan'andro ny tompon'andraikitra mpanamarin-toerana. Tsy manana rafitra vaventy fanaraha-maso entana na fiara lehibe na mila vahaolana mifameno. Mety tsara izany amin'ny fanaraha-maso kontrabandy toy ny bala, fitaovam-piadiana, rongony, firavaka ary alikaola.
Azonao atao ny mivory haingana eo an-toerana. Takelaka fakana sary mampiasa teknolojia silicon amorosy, izay mazava tsara ny sariny. Afaka miasa miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra any aoriana.
Fampivoarana sary mahery vaika sy fitaovana famakafakana.
Interface interface intuitive, sary mizarazara, tsotra ny fandidiana. Lozisialy mpankafy mpampiasa.
Famaritana ara-teknika ny takelaka fisoratana anarana
Detector Type Silicon amorphous sy TFT
Detector Area 433mm x 354mm (fenitra)
Fiakarana Pixel 154 μm
Filaharana Pixel 2816X2304 teboka
Halalin'ny Pixel 16 sombina
Mametra ny fanapahan-kevitra 3.3 lp / mm
Fotoana fakana sary 4-5s
Weight 6.4kg amin'ny Module Box
Herin'aratra 220V AC / 50Hz
Communication Tariby: 50 metatra
Tsy misy tariby: Wi-Fi 2.4 na 5.8G, 70m eo ho eo （Tsy misy tontolo elektronagnetika fanelingelenana）
Temperature miasa 0 ℃ + 40 ℃
Temperature fitehirizana -10 ℃ + 55 ℃
Famaritana ara-teknika-X-ray Generator
Fomba fiasa Pulse, mandefa pulses 4000 isaky ny rehefa voadidy tanteraka
Ora fiasana Maherin'ny 5 ora
fidirana Takelaka aluminium 50mm
Weight 5Kg miaraka amin'ny bateria
Famaritana ara-teknika - Station Imaging (PC)
Type Solosaina finday
processeur Processor an'ny Intel Core i5
miseho Fampisehoana LED feno famaritana 13 na 14 "
Hard Drive Tsy latsaky ny 500GB
Rafitra fikirakirana English MS Windows 10
Software Fanatsarana mandeha ho azy, Avadika, Avereno, sary miloko Pseudo, Ahodina, Atsimbadika Atsivalana, Flip Vertical, Zoom, Polygon On fandrefesana ny efijery, Amboary, Vonjeo, sary 3D sns.
Ny rafitra dia misy
(Ho an'ny rafitra famatsiana herinaratra sy fifandraisana)
X-ray Wire Controller misy tariby (2m)
X-ray Wireless Controller
Charger tontonana sary
Charger X-ray Generator
Previous: Rafitra Scanner X-ray azo entina HWXRY-04
Manaraka: HW-400 EOD Robot
Masinina fanaraha-maso X-Ray azo entina
Scanner amin'ny valizy X-Ray azo entina
Scanner X-Ray azo entina
Masinina scanner X-Ray azo entina
Rafitra scanner X-Ray azo entina
Fikarohana X-Ray azo entina
Rafitra fitiliana X-Ray azo entina
Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina
Fitsangatsanganana an-tongotra amin'ny alàlan'ny detector vy
Manwulator Teleskopika HW-TM
Mandehana amin'ny alàlan'ny detector vy
Scanner X-Ray Portable, Masinina scanner X-Ray azo entina, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Fakan-tsary fakan-tsary, Fitaratra fitiliana fiara, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina,